Yakanakisa Saladi Bowl Mugadziri uye Fekitori | Huanna
Kuti uwane danho rekuona zviroto zvevashandi vedu! Kuvaka vanofara, vakabatana uye vazhinji vane hunyanzvi vashandi! Kusvikira kubatsirana kwetariro yedu, vanotengesa, iyo nzanga uye isu pachedu yeYakanakisa-Kutengesa 32oz Big Soup Cup Packaging PLA Bowl Mutengesi Yakakura PLA Salad Bowl Inoraswa Chinese Chinese PLA Soup Bowl ine Lid, Gamuchirai pasi rese vatengi kuti mutaure ne isu zvebhizimisi uye -refu pamwe. Tichava shamwari yako yakavimbika uye mutengesi.
Yakanyanya-Kutengesa China 32oz PLA Soup Bowl, PLA saladi Bowl, Zvinhu zvedu zvinotumirwa pasi rese. Makasitoma edu anogara achigutsikana neyakavimbika mhando, masevhisi-anotungamira masevhisi uye nemakwikwi mitengo. Basa redu ndere "kuramba tichiwana kuvimbika kwako nekuzvipira kwedu kugadziridzo yezvigadzirwa zvedu nemhinduro nemasevhisi kuitira kuona kugutsikana kwevashandisi vedu, vatengi, vashandi, vanotengesa uye nharaunda dzenyika dzese dzatinobatira pamwe. ".
Midziyo-inomhanya-mhanya, nyanzvi yekutengesa timu, uye zvirinani mushure-kutengesa masevhisi; Isu tiri zvakare mhuri huru yakabatana, munhu wese anonamatira kukosheswa yekambani "kubatana, kuzvipira, kushivirira" kweZvakagadzirwa Zvigadzirwa China PVC Granule Plastic Material nePamusoro Hunhu, Tine chivimbo chekuti tichapa mhinduro dzemhando yepamusoro pamutengo wemutengo unogonazve , inoshamisa mushure-kutengesa rutsigiro rwevatengi. Uye isu tichaenda kunogadzira ramangwana rinotaridzika rinoonekwa.
Pashure: Ice Cream Mukombe
Zvadaro: Sauce Mukombe